Dhageyso: Eng yariisow oo shaqo ka fariisin ku sameeyay la xiriirta musuq maasuq ku sameeyay bahlaawi iyo agaasimaha maamulka….. – Kismaayo24 News Agency
Dhageyso: Eng yariisow oo shaqo ka fariisin ku sameeyay la xiriirta musuq maasuq ku sameeyay bahlaawi iyo agaasimaha maamulka…..
by Tifaftiraha K24 9th April 2017 077
Dowladda Federaalka waxey ahmiyad gaar ah siineysaa la dagaalanka musuqmaasuqa. Eng. Yarisow oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Uma dulqaadaneyno maamul xumo iyo musuqmaasuq toona, talaabadana waa bilow la doonayo in lagu hirgeliyo maamul wanaag leh isla xisaabtan iyo fur-furnaan si loogu adeego bulshada Soomaaliyeed.
Fariintan waa mid ku socota dhammaan shaqaalaha wasaarada oo cidii lagu helo maamul xumo iyo musuqmaasaq waxaa loo gudbinayaa hay’adaha ay khuseyso.
Musuqmaasuq waa waxa dalkan dib u dhigay, mas’uuliyadana waxey na fareysaa inaan ummada u horseedno maamul wanaag oo aan tusaale u noqono, si loo sii xoojiyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed.”
Soomalidii ugu badneyd oo laga soo masaafurinaayo dalka mareykanka ku dhawaad afar kun oo ruux ayaa ….
DEG DEG: Taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka oo ka bad baaday qarax gaarigiisa lagu dhuftay
Radshadihii ka aloosnaa Dalka Suudaan oo Cirka isku shareerar iyo Dowlada maraykanka oo
Musharixiinta doorashada guddoomiyaha Baarlamanaka oo Muqdisho ma wada Ol’lihii ugu dambeeyay ee Doorashada
admin 29th April 2018 29th April 2018
Haweenay isku soo Taagtay Jagada Duqa Degmada Boosaaso (Warbixin)
admin 13th August 2015 27th August 2015